Ubuntu obuqhuba kwi-Motorola Atrix | I-Androidsis
el_uliulius | | Motorola, i-ROM
Ukusuka kwiforum ye-XDA basizisela umsonto apho iMOD yoBuntu ye-Motorola Atrix iphuhliswa khona. Inkqubo inde kwaye inzima ukusombulula ezinye ii-Bugs. Akukho nto icetyiswayo kubasebenzisi be-Android abangazi ngcali, kwaye kunjalo, i-GNU / Linux. Sele sele sivelile, ekuqaleni, bayalumkisa ngokubakho 'kwezitena' (ukuthintela) kuphela ngumsebenzisi ozama ukusebenzisa ifowuni yakhe onoxanduva.
Kubonakala ngathi uyazama sombulula ukuphucula ezinye iingxaki abanazo kwiROM:
Ukuphucula imeko-bume engaphakathi kwi-Motorola.
Yandisa indawo yasimahla emva kofakelo (okwangoku kuphela yi-80mb eseleyo). Yintoni eyenza ukufakela iinkqubo kungabi namsebenzi.
Yenza indawo entsha esekwe kwi-GNU / Linux.
Ezinye zeengxaki zokufaka iinkqubo, kunye nokufumana / ukulunga (kulula ukuzilungisa).
Inkqubo yofakelo yenziwa ngeconsole. Umyili ucebisa ukuba usebenzise i-LXTerminal kwinkqubo, nangona ungasebenzisa enye. Kuya kufuneka ulandele amanyathelo ngononophelo kuba kuya kufuneka uguqule izinto 'ezibuthathaka' entliziyweni ka-Ubuntu. Kuya kuba yimfuneko ukukopa inxalenye yenkqubo, ukuyinyusa kwaye emva koko uyifake. Emva kwexesha kuyakufuneka ukufaka inani leephakeji ezinje nge-dbus, pulseaudio, udev okanye xorg.Ngemva kwenani elikhulu lemiyalelo kunye nokuhamba kweefayile kunye neefolda, ubukhulu becala siza kufakelwa Ubuntu. Kodwa ngaphandle kokufaka iinkqubo, akuncedi kangako. Abathethi ngokusebenza kweendawo zefowuni, ezinje ngesandi, bt, okanye i-wifi.
Akubonakali ngathi yi-100% esebenzayo yeROM, kodwa oku kuvula iingcango ezininzi kuphuhliso lwe-GNU / Linux njengoko kunjalo kwezinye iiterminal. NjengakwiNokia N900, ukusasazwa ngokusekwe kwiDebian okanye nakuphi na okunye ukusasaza kuya kuba luncedo malunga nokuphuhlisa nokudibanisa iinkqubo esele zikho kwidesktop. Ngokunikwa imeko yeGajethi, inamandla amakhulu kwaye iyaphatheka, mhlawumbi le yindlela entsha, izixhobo eziselfowuni, nangona iPC yobomi ihlala khona.
Ngaba le yindlela elungileyo yophuhliso? Ngaba kungangcono ukugxila kwiHoneycomb?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Motorola » Ubuntu osebenza kwi-Motorola Atrix
Malunga nonyaka ophelileyo bekukho isifundo sokuqhuba ubuntu kwi-android, endiyivavanye kwiMilestone 1 ebendinayo, ibaleke kakhulu, emva nje kokuba iye yagqitha ngaphezulu kwe-1 mhz yaqala ukusebenza kancinci ...
Ndicinga ukuba singabona uBuntu ebaleka kumatshini wethu wokuhlamba (kwaye ndicinga ukuba lolo suku luza kufika). Hahaha.